Igumbi leStudiyo seRose Desert - I-Airbnb
Igumbi leStudiyo seRose Desert
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguKelly
Igumbi elihle, elilula, kodwa elitofotofo, elinezinto ezininzi ezithandwa nguKelly noYaron. Ihonjiswe ngendlela yelizwe likaRose Desert, enee-pastels ezimfumamfuma nezinto ezenziwe ekhaya. Ikumgangatho wesibini, ngoko kukho inqwelo-moya enezitepsi eya kwiflethi. Kukho iveranda enkulu eseluphahleni nenendawo yokuhlala entlango enomthunzi.
Ikufutshane nendawo egciniweyo yendalo yaseZin. Abantu bayathanda ukuza ukunyuka intaba, okanye ukuphumla kwiintaba ezintle zaseNegev. Imozulu yomile kwaye ixesha elininzi lonyaka ngokuhlwa zipholile. Iflethi inebhalkhoni enembonakalo entle yentlambo i-Zin Desert canyon. Le flethi iphezulu kwikhaya lethu lentsapho.
Ingingqi yethu yindawo yokuhlala kodwa ikufutshane nendawo yokungena kwipaki yelizwe ye-Ein Avdat. Ukusuka eluphahleni kukho indawo yokubona iWadi Haverim. Inento yonke, kuquka ezinye izindlu, iyunivesithi, ukujonga, iindawo zokudlala, ivenkile enkulu, iofisi yeposi njl.
Siyakuvuyela ukunxibelelana neendwendwe nanini na. Bangafowunela kule nombolo: +972508671921 okanye ngeimeyile glik.fam@gmail.com